Fandaminana saina :: Mihamaro ireo olona manatona manam-pahaizana momba ny toetra • AoRaha
Fandaminana saina Mihamaro ireo olona manatona manam-pahaizana momba ny toetra
Mitombo isa ireo olona manatona psykôlôgy na ireo manam- pahaizana momba ny toetra ankehitriny raha vitsy ny nanao izany teo aloha. Ny fisian’ ireo mpitsabo manoro ity karazana fanohanana sy fitsaboana ara-tsaina ity no fantatra fa anton’izany.
Ankoatra izany, eo ihany koa ireo orinasa sy sekoly samihafa izay manakarama azy ireny handray an-tanana ny fanampiana ireo mpianatra sy mpiasa amin’ireny. Eo indrindra ihany koa ny fahatsapan’ny Malagasy fa ilaina amin’ny famahana ny olana samihafa mihitsy ireny psykôlôgy ireny. “Ny lafiny rehetra amin’ ny fiainan’ny olombelona mihitsy dia azon’izy ireo hanatonana psychology”, hoy Andrianilaina Koloina, filohan’ny Holafitry ny psykôlôgy eto Mada- gasikara , omaly, teny Antananinarenina.
Hatreto, dia ireo olona manana olan-tokantrano sy amin’ny fanambadiana no fantatra fa betsaka manatona azy ireny eto amintsika. Manaraka azy ireo ny ankizy manana olana any an-tsekoly, toy ny tsy fifantohana loatra amin’ ny fianarana, na tsy maharaka na misy olana ara- tsaina tokony hovahana. “Rehefa mahatsiaro mila fanampiana dia afaka manatona psykôlôgy avokoa”, hoy hatrany Andrianilaina Koloina.
Araka ny fanazavan’ ny mpikambana ao amin’ny Holafitra ihany dia efa miezaka izy ireo manakaiky ny olona satria efa misy ireo manam- pahaizana momba ny toetra mpiasam-panjakana ankehitriny, izay mandray mamaim-poana ireo marary any amin’ny toeram-pitsaboana samihafa. Heverin’ny olona ho lafo rahateo ny saram-pitsaboana ka mampihemotra azy ireo.
Manodidina ny fito ambin’ny folo ankehitriny ireo psykôlôgy mpikambana ao amin’ny Holafitra raha eo amin’ny telopolo eo ho eo no am-perinasa. Mbola eto Antananarivo ihany aloha no tena ahitana azy ireo, araka ny fantatra. Tsiahivina fa samy manana ny maha izy azy ny “psychiatre”sy ny “psychologue” . Mamaha ireo olana ara-tsaina amin’ ny alalan’ny fifampiresahana ny iray voalohany. Mitsabo ary manome fanafody mihitsy kosa ilay faharoa. Misy sekoly ambony roa mamoaka psykôlôgy eto amintsika. Maharitra dimy taona na mihoatra ny fianarana hatao amin’izany.
Fakana an-keriny eto an-drenivohitra :: Manamboninahitra iray sarona niaraka tamina basy sy bala an-jatony
Kitra – UEFA Champions League :: Tsara toerana ny Manchester City sy ny Atletico Madrid